Cameron.....: အိန်ဂျယ်ခြွေတဲ့ ကြယ်ကြွေတွေ.....
အဲဒီညနေက နေညိုညိုအ၀င် ညရောင်စပ်ကြား… တိမ်တွေအနုကအရင့်ပြောင်းနေချိန်မှာ…. ကောင်းကင်က လင်းလင်းလက်လက်… ကြယ်မှုန်မွှားတစ်စု ဖွာခနဲကြွေကျလာတာကို ကိုယ်မြင်လိုက်တယ်….။ အလင်းတန်းလေးတွေက ကောင်းကင်မှာ ချက်ချင်းမှိန်ဖျော့ ပျောက်ကွယ်မသွားသေးဘဲ…..။ စက္ကန်းပိုင်းကလေး ကိုယ့်ကို မြင်ခွင့်ပေးသေးတယ်……။ ကြယ်မွှားကလေးတွေ မြင်ကွင်းရှေ့က ပျောက်ကွယ်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တော်တော်ကလေးဝမ်းနည်းသွားခဲ့တယ်……။ ကိုယ်သိတာပေါ့… အိန်ဂျယ် မင်းကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး Magic stick ကလေးနဲ့ ကိုယ့်ကို လှည့်စားသွားခဲ့တာမဟုတ်လား….။ အဲဒီတမဟုတ်ချင်း အချိန်ကလေးမှာတောင် ကိုယ်ဆုတစ်ခုတောင်းလိုက်မိသေးတယ်…..။ မင်းနဲ့ ပြန်ဆုံဖို့ကိုပေါ့….။
ကိုယ်လေ….နေလုံး၀၀င်သွားလို့…ညအရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိ နွေညချမ်းရဲ့ ကောင်းကင်ကို မျက်နှာအပ်နေမိတော့တယ်…..။ မမှိတ်မသုန်နဲ့မင်းများ….ဘွားခနဲပေါ်လာနိုးနိုးနဲ့ပေါ့…။ လေပြေဟာ…. သစ်ရွက်နုတွေရဲ့ စိမ်းရွှေရွှေရနံ့ကို သယ်ဆောင်လာကြတယ်……။ တောက်ပတဲ့ ကြယ်ကလေးနှစ်ပွင့်ကို ကိုယ်မြင်ယောင်မိတယ်….။ ခပ်ထူထူနှုတ်ခမ်းတစ်စုံရဲ့ ဒေါင့်နှစ်ဖက်မှာ ပြုံးလိုက်တိုင်းပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အချိုင်းကလေးနှစ်ခုကို မြင်ယောင်မိတယ်…။
ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းကင်မှာ လတစ်စင်းကို ခိုတွဲလို့….. မင်းလက်ထဲက Magic Stick အစွမ်းနဲ့ ကြယ်ပွင့်ကလေးတွေကို ခြွေချမယ့် ညတွေကို ကိုယ်စောင့်မျှော်နေခဲ့တာပါ……။ လမင်းကြီးကပြောနေပြီ…. မိန်းကလေးရယ်….မင်းဟာ သိပ်ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာပဲတဲ့……..။ ပြောပါ လမင်းကြီးရယ်…. တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ စိတ်ကူးပဲယဉ်ခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ…..။
မိုးကောင်းကင်ထက်ကနေ မင်း..ဆီးပြီးကြည့်လိုက်ပါ…….။ အ၀ါရောင်းပန်းခင်းတွေကြားမှာ… အရူးတပိုင်းနဲ့ မင်းကိုပြေးလွှားရှာဖွေနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်….။ အ၀ါရောင်ပန်းခင်းတွေကြားကနေ လွမ်းရလွန်းလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး အဖြူရောင်ပန်းခင်းတွေအဖြစ် ဖန်ဆင်းပေးပါ....အိန်ဂျယ်…….။
ပြောပါ လမင်းကြီးရယ်…. တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ စိတ်ကူးပဲယဉ်ခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ…..။